Ngamunye wethu kusukela ekuzalweni unencazelo eyakheke yenkambo yezinqubo zezinzwa. Kwezinye, ikakhulukazi ziqondiswa zona, kanti abanye - kwabanye. Ngesinye isikhathi, uCarl Jung wachaza izakhiwo ezinjalo zesimo sengqondo somuntu njenge-extraversion kanye nokungeniswa. Manje ukuthi abantu abaningi banesithakazelo ekuthuthukiseni okusebenzayo kwengqondo kanye nemiphakathi, la magama asethandwa kakhulu futhi ngokuvamile ayenzeka ekuphileni kwansuku zonke. Ngesikhathi esifanayo, abanye bakholelwa ukuthi ukufaka isingeniso isimo sengqondo esinesici esithile esibi futhi kufanele silahlwe. Ingabe lokhu kunjalo ngempela? Ake sizame ukuyihlola.
Lesi sakhiwo somqondo wengqondo sabantu sisho umsebenzi, inamba enkulu yoxhumana nabo, isifiso sokuba seminyene yezenzakalo, ukuqoqa abantu abaningi. Ukuxubile kuyothola injabulo yangempela emihlanganweni ehlukahlukene enomsindo kanye namaqembu. Bajwayele ukufisa ukuhlangenwe nakho okusha, ukukhungatheka nokungakhathaleli.
Lesi isimo sengqondo esibhekiswe ezweni langaphakathi lomuntu. Abantu abazalwa kuwo, ngokuvamile banesizungu. Zibonakala ngokuhlukaniswa, ukuthobeka, ukuzihlukanisa, ukuzwela nokuzwela. Bayaziwa futhi ngenxa yokungafuni ukuxhumana nabantu abangabazi. Kunabangane abambalwa, kodwa bangabanye ababhekwa njengabangempela futhi abangathembeka ngesikhathi esilukhuni.
Lo mhlaba, kuye ngokuthi ubuchopho buntu buvame ukuhlukaniswa zibe izinhlobo ezimbili. Uma umuntu engaqiniseki ngokomzwelo , ungumuntu oncibilikisayo, futhi uma kunoma yisiphi isimo uhlala ezolile, khona-ke uyisimo se-phlegmatic. Kumele kuqashelwe ukuthi ukufaka isingeniso kuyisici esingenasici se-psyche, lapho, uma ifunwa, ayikwazi ukuguqulwa. Ngenxa yokwenqatshwa komphakathi, umuntu onjalo angakwazi ukulungisa, welula imaski futhi okwesikhashana abe ngumuntu othakazelisayo nojabulisayo. Kodwa ngokushesha nje uma i-introvert inesidingo sokudlala le ndima izoshabalalisa, uzophinde aphenduke ukuthi ubani ngempela
Kungani kunombono wokuthi ukungena ngemvume kubi
Ngokuvamile abantu abanalolu hlobo lomlingiswa banomuzwa wokunganaki, ukungavikeleki kanye nokusebenza okuphansi. Ngokusho kwezibalo, emphakathini kukhona cishe ngo-30%, okungukuthi, ngaphansi kwe-extroverts. Futhi njengoba abantu abajwayele ukuya ezweni langaphandle bavame ukubheka ukukhulumisana nokuxhumana ngokubambisana njengesizathu sokuba khona, bakhetha ukugwema izethulo, bathi "bangabantu abamnyama" kanye "nabantu abasengqondweni yabo". Ngaphezu kwalokho, uma umuntu ethanda ukuzibusa, ubungozi bokuthi ugovu, ukuhlukanisa, ukuzidla nokuzifihla.
I-introversion inhle njengokungeza
Eqinisweni, isizungu asibi kakhulu. Uma umuntu emthanda futhi emthanda, kusho ukuthi akakwazi nje ukuthi ukungabi nokuxhumana kuyini. Uma i-psyche ihlelwa ukuze ukuxhumana nokuxhumana nabantu abakhulu ngokweqile kubangele ukukhathala okukhulu, ke ungathukutheli uma ukuhlolwa kokungeniswa kwembono kubonise imiphumela emihle. Qaphela ukuthi emphakathini umphakathi umqondo wokusungulwa nokukhishwa kwemali uboleka emfundisweni yeCG Jung, futhi ngokwengqondo kwengqondo lezi zici zihunyushwa ngokuhambisana nezincazelo zikaG. Eysenck. Kungenzeka ukuthi umuntu ungumphefumulo wenkampani, unabangane abaningi, ungenangqondo futhi awukhathaleli, kodwa ngesikhathi esifanayo ugxile kuye kuphela: ngemizwa yakhe, ukuhlolwa kwakhe kwezenzakalo, isimo sakhe. Ngakolunye uhlangothi, i-extrovert evela endaweni yokubukela emiphakathini yombuso ingase ingabi yithando lomuntu, i-recluse, umuntu ozwela kakhulu futhi onokwethenjelwa. Kodwa ngesikhathi esifanayo uyoba nesithakazelo kakhulu kuzo zonke izenzakalo ezenzeka ezweni langaphandle nokuthi yini abantu abazungezile abacabanga ngaye.
Imephu yengqondo: izibonelo nezigaba zokwakhiwa
Iziphi izici has ebhokisini-irobhothi
Le filimu "Igundane Race": nabalingisi, ngesakhiwo
Intombazane ikhekhe iminyaka 14: design imibono
Perm. UPetru noPawulu Cathedral kanye nomlando wayo